Ikhaya leHolide elinomtsalane eGodrano elineGadi kunye neBarbeque
Ikhaya leeholide zaseRustic kumaphandle aseSicilian akufuphi nepaki yendalo eyaziwa ngokuba yiBosco della Ficuzza, le ndawo ikumgangatho ophantsi kwaye inekhitshi, igumbi lokuhlala elinetafile yokutyela, kunye negadi yokuseta iibarbeques. Kwakhona, ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ngemoto, unokufikelela kunxweme olunelanga lonxweme lwaseSicilian.
Akukho kude kakhulu kunepaki yelizwe ukuze ukonwabele ukuhambahamba. I-Palermo kukuhamba kweyure ukusuka kwindawo yakho yokuhlala kunye nezinye izixeko ezifana neMondello kunye neMonreale. Indawo yokutyela yokutyela kakuhle ikumgama oziikhilomitha ezi-5 kuphela.
Indlu ixhotyiswe nge-air conditioning (ngentlawulo) kunye noqhagamshelo lwe-WiFi. Indawo ilungele abo bafuna ukuzola kunye nokunxibelelana nendalo. Unokuza nomnye wabahlobo bakho abanoboya kunye nawe simahla. Zombini i-air conditioning kunye nezixhobo zokufudumeza ziyafumaneka ngentlawulo encinci.
Abahambi abazimisele ukubhabha baya kufumana isikhululo seenqwelomoya sasePalermo kumgama oyi-35 km kude.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (ikhitshi elivulekileyo (itafile yokutyela, ihob (izitovu zeringi ezi-4, igesi), umatshini wokuhlamba izitya, ifriji-ifriji, isitya sokuhlambela), Indawo yokuhlala/igumbi lokutyela(ibhedi ephindwe kabini, iTV, itafile yokutyela, indawo yomlilo, umoya), igumbi lokulala (ibhedi ezimbini okanye iibhedi ezi-2 zabanye abantu), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese, ibhidet), igumbi lokuhlambela(ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese, ibhidet))